सरकारले भन्यो– ‘बालबालिकामा संक्रमण बढ्दैछ ख्याल राख्नू’ – Health Post Nepal
सरकारले भन्यो– ‘बालबालिकामा संक्रमण बढ्दैछ ख्याल राख्नू’
२०७७ असार १७ गते १७:०६
असार १७- सरकारले देशभर बालबालिकामा संक्रमणको घटना बढ्दै गएको भन्दै विशेष सावधानीका लागि सचेत गराएको छ ।स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले देशभर १४ हजार भन्दा बढी संक्रमितमध्ये २ हजार ६१ जना १८ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेको जानकारी दिए ।
उनले हालैमात्रै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ९ वर्ष मुनिका १७५ बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । उनले संक्रमणबाट मृत्यु भएका केही बालबालिका भएको भन्दै का बालकालिका संक्रमित सुदूरपश्चिमा एकदिन १७५ बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको र सबै भारतबाट आएको जानकारी दिए ।
बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउने जिम्मेवारी बाबुआमा र अविभावकको भएको भन्दै उनले बालबालिकालाई घरमैमा राख्न, भिडभाडमा नलान र बाहिर लैजानुपरे आफू र बालबालिकालाई पनि अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।
अविभावक संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकाबाट टाढै बस्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ ।
संक्रमित भएको आमा वा अन्य व्यक्तिले बच्चाको नजिक रहँदा, हाच्छियूँ गर्दा वा माया गर्दा बालबालिकामा संक्रमण हुने अवस्था उच्च नै हुन्छ।
किन बढिरहेछ बालबालिकामा संक्रमण?
अहिले बालबालिकाको कोरोना संक्रमणकाे प्रकृती हेर्दा वयस्क व्यक्तिबाटै सरिरहेको बालरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
उसो त कोरोनाको संक्रमणमात्र होइन। बालबालिकामा जुनसुकै संक्रमण गर्भवस्था वा वयस्क व्यक्तिबाट सरेको भनिएको छ।
तर, गर्भवस्थाबाट बच्चामा कोरोना संक्रमण हुने हाल प्रमाणित भइनसकेको बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छा बताउँछन्।
नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको नवजात शिशुमा पनि संक्रमण देखिएन।
‘विश्वमा तथ्यांक हेर्दा ३–४ वटा केस गर्भावस्थाका कारणले बच्चामा संक्रमण भएको पाइएको छ,’ डा. बिच्छाले भने, ‘कोरोना संक्रमित आमाले बच्चालाई दूध खुवाउँदा सर्ने हालसम्म प्रमाणित भएको छैन।’
उनका अनुसार संक्रमित भएको आमा वा अन्य व्यक्तिले बच्चाको नजिक रहँदा, हाच्छियूँ गर्दा वा माया गर्दा बालबालिकामा संक्रमण हुने अवस्था उच्च नै हुन्छ।
नेपालको बालबालिकाको संक्रमणको टे«न्ड हेर्दा वयस्क व्यक्तिबाटै सरिरहेको पुष्टि हुन आएको छ।
विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि बच्चालाई लगाउने बिसिजी खोप तथा अन्य खोपका लगाएका कारण संक्रमणको दर कम भएको अनुमान गरिएको छ।
यस विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आए पनि ठोस निष्कर्ष अझै आइनसकेकोे उनको भनाइ छ। उसो त बालबालिकामा मात्र होइन, संक्रमणसँग जुध्नका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले समेत बिसिजी खोप लगाउँदै आएका छन्।
सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा संक्रमित
सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रदेश २ मा संक्रमित भएका छन्। प्रदेश २ मा ९९ जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। प्रदेश ५ मा ९०, सुदूरपश्चिममा १७५, कर्णालीमा ४२, गण्डकीमा १७, प्रदेश १ मा १०, वागमतीमा ३ बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हो ।
‘आर्थिक विपन्न वर्गका बालबालिकामा कुपोषण समस्या हुने नै हुन्छ। यस्ता बालबालिकामा निमोनिया, झाडापखालाको समस्या भइरहेको हुन्छ,’ डा. विच्छा भन्छन्, ‘यस्ता उमेर समूहमा कोभिडमात्र नभएर अन्य संक्रमणले पनि मृत्यु हुने सम्भवना बढी हुन्छ।’
दुई बालबालिकाको मृत्यु, कारण भने झाडापखला र ज्वरो
हालसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको कारण ३० जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये दुई बालबालिका छन्।
जेठ २५ मा बाजुराकी दुई वर्षीया बालिका भाडापखाला जस्ता समस्याबाट ग्रस्त भएर र जेठ ३० मा बाराका पाँचवर्षे बालकको उच्च ज्वरोका कारण मृत्यु भएको थियो। उनीहरू दुवैको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
कोरोना संक्रमितको मृत्युको ट्रेन्ड हेर्दा दीर्घरोगी, क्यान्सर, मुटु, कलेजोका समस्या भएका व्यक्तिमा भइरहेको छ। बालबालिकामा पनि मुटुको समस्या, क्यान्सर वा छातीमा निमोनिया भएकाको मृत्यु बढी हुने गरेको डा. बिच्छाले बताए।
बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले संक्रमणको दर अन्यको तुलनामा बढी हुनुपर्ने हो। धेरै मानिसहरू भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा संक्रमण पुष्टि भएका छन्। संक्रमण समुदाय स्तर अझै नफैलिएको हुनाले बालबालिकामा संक्रमण दर कम भएको विज्ञको अनुमान छ।
बालबालिकालाई संक्रमणबाट कसरी जोगाउने?
सावधानीपूर्वक संक्रमित आमाले बच्चालाई दूध सेवन गर्दा संक्रमण नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। आमाको दूधमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने एन्टिबडी रहने हुनाले झनै संक्रमणका बेलामा बच्चालाई बेस्ट फिडिङ गर्नुपर्ने डा. विच्छाको सुझाव छ।
संक्रमणबाट जोगाउन पर्याप्त रूपमा पानी सेवन, झोलिलो पदार्थ खुवाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यस्तो बेलामा बालबालिकाको विशेष हेरचाह र सरसफाइमा ध्यान दिनुपदर्छ। बालबालिकाको लुगादेखि लिएर सुत्ने कोठा र खेल्ने ठाउँ सफा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बुझ्ने बालबालिकालाई सामाजिक दूरी कायम गर्न र बारम्बार हात धुन सिकाउने गर्नुपर्छ।’
विशेष गरी घरमा रहेका बिरामी वा बाहिर आएका मानिसबाट टाढा राख्न सके केही हदसम्म बालबालिकामा संक्रमण रोक्न सकिने उनको तर्क छ।